राजनीति – Page5– सप्तरंगी एफ एम
कांग्रेसमा कोईराला परिवार मात्रै नभएर सबै नेता कार्यकर्ता एक हुनु पर्छ : महामन्त्री डाक्टर सशांक कोईराला
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर १०/ कांग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशांक कोईरालाले कांग्रेसमा कोईराला परिवार मात्रै नभएर सबै नेता तथा कार्यकर्ता एक हुनु पर्ने बताउनु भएको छ । झापाको दमकमा आज पत्रकारहरु संग कुरा गर्दै कांग्रेस महामन्त्री कोईरालाले कांग्रेस गुटबन्दीका कारण बिग्रिएको भन्दै सबै कांग्रेस एक हुनु पर्ने धारणा राख्नु भयो । युवा पुस्तालाई समेटेर पार्टिलाई नयाँ ढंगले संगठन निर्माण गर्नको लागी आफुहरुले ...
वर्तमान सरकारले जनताको हितमा कुनै पनि काम नगरेको झापाली कांग्रेस नेताहरुको आरोप
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर १०/ वर्तमान सरकारले जनताको हितमा कुनै पनि काम नगरेको कांग्रेस नेताहरुले आरोप लगाएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन माई पश्चिम क्षेत्रीय समिति झापाले आज दमकमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वर्तमान सरकारले जनताले अपेक्षा गरेको जस्तो कार्य नगरेको कांग्रेस नेताहरुले आरोप लगाएका हुन् । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेशका महासमिति सदस्य डा. खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले दुई तिहाईको आडमा सरकार अधिनायकवाद तर्फ ...
नेपाल प्रेस युनियन झापाको पद हस्तान्तरण सम्पन्न
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर ३/ नेपाल प्रेस युनियन झापा शाखाको नवौं अधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्य समितिलाई आज पदहस्तान्तरणसहित पमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । विर्तामोडमा सम्पन्न कार्यक्रममा गत असोज १३ भएको अधिवेशनबाट इन्दु पूर्वेलीको अध्यक्षतामा निर्वाचित कार्य समितिलाई तत्कालिन अध्यक्ष कृष्ण हुमागाइँले पद हस्तान्तरण गर्नु भएको हो । सोहि अवसरमा यूनियनका कार्यसमिति, प्रदेश प्रतिनिधि र केन्द्रीय प्रतिनिधिहरुलाई निर्वाचन समितिले प्रमाणपत्र प्रदान गरेको ...
दमकको वडा नम्बर ५को वडा कार्यालय स्थापना
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/कात्तिक १७/ दमकको वडा नम्बर ५ आज देखी वडा कार्यालयमा स्थानन्तरण भएको छ । स्थानिय दिपिनि बिद्यालय अगाडी एक घर भाडामा लिएर वडा कार्यालय सन्चालनमा ल्याईएको हो । आज एक कार्यक्रमका विच प्रदेशसभा सदस्य अर्जुन राईले वडा कार्यालयको उद्घाटन गर्नु भयो । यस अघि नगरपालीकाबाटै वडा कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएकोमा आफ्नै वडामा घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिएको ...